ဒူဒူကြီး: Heat detectors နဲ့ Flame detectors
Fire detection system တွေမှာအသုံးပြုတတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့၊ fire alarm sensorsတွေကို၊ အမျိုးအစား ခွဲကြည့်ရင်၊ Optical Flame detectors အုပ်စုမှာ Ultraviolet (UV) Sensitive နဲ့ Infrared (IR) Sensitive, Heat Detectors အုပ်စုမှာ Fixed or Rate compensated နဲ့ Rate of Rise, Smoke detectors အုပ်စုမှာ Photoelectric Type, Ionization Type နဲ့ Combination Type သို့မဟုတ် combo detector တွေ တွေ့ရ မှာဖြစ်သလို၊ acoustic fire detector ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။
Heat detectors တွေကို၊ အမျိုးအစားခွဲကြည့်ရင် rate-of-rise detectors တွေနဲ့ fixed သို့မဟုတ် rate compensated detectors တွေဆိုပြီး၊ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Fig. Rate-of-rise heat detector
Rate-of-rise heat detectors တွေဟာ၊ normal baseline condition မှရှိနေတဲ့ ambient temperature ကနေ၊ temperature ဟာရုတ်တရက် ချက်ခြင်း ပြောင်းလဲသွားတာနဲ့၊ trigger circuit ကို activated လုပ်တဲ့၊ detectors အမျိုး အစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ROR လို့ခေါါကြတဲ့ Rate-of-Rise heat detectors တွေ ဟာ၊ တမိနစ်မှာ 6.7° to 8.3°C နှုံး သို့မဟုတ် 12° to 15°F နှုံးလောက် လျှင်မြန်တဲ့ temperature ပြောင်းလဲမှုတွေအပေါါ detect လုပ်နိုင်ပါတယ်။ temperature ပြောင်းလဲမှုဟာ တမိနစ်မှာ 6.7° to 8.3°C နှုံးထက်ပိုလာတဲ့အခါ၊ trigger circuit ကို၊ activated ဖြစ်စေပါ တယ်။
ROR တွေကို low energy fire လိုမီးလောင်မှုမျိုး temperature ဟာရုတ်တရက် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲ မှု မရှိတဲ့ မီးလောင် မှု တွေအတွက် အသုံးပြုဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။ သဘေ်ာတွေမှာတော့ fast burning နဲ့ flaming fire လို၊ မီးလောင်မှု တွေဖြစ်တတ်တဲ့၊ paint store နဲ့ chemical store လိုအလုံပိတ်အခန်းတွေ မှာ၊ တတ်ဆင် အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Rate compensated heat detectors
fixed သို့မဟုတ် rate compensated heat detectors တွေကိုတော့၊ hot work area ဖြစ်တဲ့၊ သဘေ်ာက work shop လို နေရာမျိုးမှာ တတ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ eutectic alloy ဆိုတဲ့ heat sensitive element metal ကို၊ sensor အဖြစ်အသုံးပြုထားပြီး၊ မီးလောင်မှုကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့၊ အပူရှိန်ဟာ မူလသတ်မှတ်ထားတဲ့၊ temperature setting တခုကိုရောက်သွားတဲ့အခါ၊ trigger circuit ကို၊ activated ဖြစ်စေပါတယ်။ Heat detectors တွေမှာ၊ alarm activated temperature setting ကို၊ 58°C သို့မဟုတ် 136.4°F နဲ့ တချို့ Heat detectors တွေမှာတော့ 47°C သို့မဟုတ် 117°F ခန့် ထားလေ့ရှိပါတယ်။
Flame detectors အုပ်စုမှာ Ultraviolet (UV) Sensitive နဲ့ Infrared (IR) Sensitive ဆိုပြီး၊ အသုံးများတဲ့ detectors အမျိုးအစား (၂) ကိုတွေ့ရပါတယ်။
မီးလောင်မှုကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ flame ကို၊ detector လုပ်ရာမှာ၊ combustible material အမျိုး အစား ပေါါမူတည်ပြီး၊ flame detectors တွေကို ရွေးချယ် တတ်ဆင်ပါတယ်။ အကယ်၍ မီးလောင်တဲ့ အခါ၊ combustible material ဟာ၊ flame တွေသာမက smoke ကိုပါထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်၊ Ultraviolet (UV) Sensitive type flame detectors တွေကိုတတ်ဆင်အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ smoke particles တွေကြောင့်၊ light scattering တွေပေါါပေါက်လာပြီး၊ UV ray ကို၊ block ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Infrared (IR) Sensitive type flame detectors တွေကိုသာ၊ တတ်ဆင်ပါတယ်။
သဘေ်ာက boiler နဲ့ incinerator တွေဟာ၊ abnormal condition အခြေအနေ တွေမှာ၊ neck flame တွေပေါါပေါက် တတ်တာမို့၊ infrared flame detectors တွေကိုအသုံးပြုကြသလို၊ oil burning unit area တွေဖြစ်တဲ့ purifier space နဲ့ oil heater area တွေမှာလည်း၊ infrared flame detectors တွေကို သာတတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
Image Credits to : http://www.ein-azaitoon.com, http://ohanacontrols.com, http://www.firetronics.com.sg